AYYAANNI GUYYAA GOOTOTA OROMOO TOKKUMMAA BARATTOOTA OROMO BIYYA JARMANII (TBOJ) DAME HESSEN-TBOHn KABAJAME
Jaal Haruun, muxaannoo qabsoo hidhannoo kessaa argatani caqasudhaan barumsa kennan kessaa, ummanni oromoo maaliif guyyaa kana akka kabaju, wareegama goototni Oromoo gochaa turan, gootota Oromoo maqaa dhahun ibsaa bal’aa laatani jiru. Akkasumas goototni Oromoo saba saaniif wareegama haga lubbuusaanii kennuutti godhaniin bu'aawwaan heedduu kan galmeesisan ta’u isa mirkanessan. Dhaalootni har’aa kun ammoo bu'aawwan argaman tiksudhaan Qabsoon gara fulduratti akka tarkanfachisu qabuf gummaa isanni deebisuuf nutii ilmaan Oromoo harka walqabanee tokkumman qabsa'u akka qabnu dhamsa dabarsani jiru.
Itti ansudhaan miseensoota keessa Jaal Robera Bultee fi Addee Nagase Adunya wa'ee guyyaa gootota ilaalchise walaloo hamilee hirmaattootaa cimsuu dhiyeessani jiru.
Seenaa Gootonni oromoo qabsoo bilisummaa oromof jecha wareegama hanga lubbu isanii dabarsanii kennuu ga’an kana bakka amma jirurraa fuula duratti tarkaanfachisuuf akkasumas wanjoo gabrummaa motummaan abbaa hirree ummata kenyarrati fe’ee jiru cabsuuf ummani oromo tokko ta’e walbira dhaabbachuu akka qabu akkasumas qabso bilisummaa oromof godhamu haalatti cimsuun danda’amurratti mariin ballaan godhameera.
Maayyiirrattis miseensootni Tokkumma Baraattoota Oromoo Biyyaa Jarmani damee Hessen ibsa ejjeennoo armaan gaditti ibsameen kabaja ayyaannichaa xumure jirra.
1.Oromoo biyyaa irra baqatee biyya Kenyatti hirkannaa gaafatee jiru, gariin hidhamaa gariin ammoo gara motummaa TPLFtti dabarsame kan kennamaa jiru ta’unsaa baayyee nu gaddisisee jira. Kanaaf tarkaanfiin kun waliigaltee Biyyolessaa addunyaa kan Mirga dhala namaa fi Mirga baqattoota kan Fallessu waan ta’eef, gocha kana cimsinee balaaleffanna akkasumas Mootummaa biyyaa Kenyaa deemsa kana hatattamaan akka sirressu waamicha kenya dabarsiina.
2.Mootumma abba irree TPLF-woyyaanettin, dhiittaa mirga namoomaa saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhabbaatu cimsine gaafana, gocha suukanneessaa kana karaa kaminiyyu falmuuf qophii ta’u keenya ni mirkanessina.
3.Ummaanni Oromoo bakka itti dhalate biyya isaarra mirga jiraachuuf misoomsuu osoo qabuu, sababa Saamicha lafaan ykn “ Land grab” qee’e isaarraa humnaan buqqifamee gara biyya ambaatti akka baqatu godhamaa jira.. Mootummaa woyyaanne mirga ummaata oromoo cabsun lafa Oromoo sammuu fi gurguruun umrii isaa itti dheeressuf yaalinni gochaa jiru akka dhaabu cimsinee ni hubachifna.
4.Mootummaan TPLF aangoo humnaan qabate turfachuuf tooftaa gosoota walitti bussuun fayyadamaa jiraachunsaa beekama dha. Haluma kanaan wal dhabbii gosoota Oromoo lamaan, Gujii fi Booranaa gidduutti ummee kun tooftaa angoo isaa ittiin dheereffatu akka ta'e Oromonnis hubatani waldhabu irra akka of qusatan fi tokkummaan akka dhaabatan waamicha kenya ni dabasina.
5.Ilmaan Nafxanyoota, marsaale hawaasa adda addaa irraatti duula ummata oromoorratti akkasumas afaan oromoo dhabamsiisuf geggeessaa jiran nibalaaleffanna.
6.Maqaa misoomaatin mootummoonni dhihaa gargaarsa motummaa wayyaaneetif gochaa jiran. haata’u malee gargaarsi horii kana kallattiin itti faayyadamuu dhiisee hirree gabronfataa isaa iittin cimsutti faayadama jirachu isaa hubachu dhaan gargaarsa godhama jiru akka dhabatu dhamsa dabarsina.
7.Gara Jaarmayaalen siyaasaa oromoo, garaagarummaa xixiiqoo isin giddu jiru dhipphisuudhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoof tokkummaan akka diina dura dhaabbattani waamicha kabajaa dhiyyeesina.
Gabaasa Kora TBOH
17.11.2013, Frankfurt Germany
Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii damee Hessen (TBOH) magaala Frankfurtitti guyyaa 17.11.2013 tti Kora isa geggeesse.
Sagantichi Akka Aadaa Oromootti eebbaa Manguddo Oromoon baname, itti aansudhaan gaabasa hojii Koree hojii geggeessituu dhihaate. Ittiansuudhaan gaabasa dhihaate irraati Marii ball‘aa godhame, cimina jiru jabaate akka itti fufu akkasumas hanqina jiru irraa foyyeessuf yaadni adda addaa manaan dhihaate, Koree itti aanu akka hojii irra oolchu erga dabre jira.
Itti aansudhaan Haalli Siyaasa yeroo biyya Kessa fi biyya alaa ilaalchise Barumsa Barressa Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii irra kenname booda dhimmoota adda adda irraattis Marii geggeefame. Haala Ibsaa kanaan TBOJ qaama of daanda'e dhaabate ta'e, Qabsaa‘oota Bilisummaa Oromoo hundaa ija tokko ilaalu dhaan, laami Oromoo hunda kabajaan wol- hirmachise kan hojjetu akka ta'e ibsaamera.
Dhuma irratti, filaanno koree hojii gaggeesituu TBOJ daame Hesen gaggeeffame. Koreen Haarawaa filatame kunis hojii isaa yeemmu jalqabu,
Dirqama Oromommaa isa: Lammii Oromoo hundaaf osoo naannoon, gosaan, amantaan fi kkf addaan gargar hin baasin tajaajila walqixe ta'e kennuuf, akkasumas hamma Oromiyaan Bilisaa baatutti nan dhadhabe kun na hintaane utu hinjedhin QBO geggeffama jiru kessatti dirqama isaani irra eegamu hunda kan bahaan ta‘u waddaa galani jiru.
Guyyaa kanatti, haala sukkaneessaa yeroo ammaa Mootummaa abbaa irree Itiyoophiyaatiin lammii Oromoo Kumaatamaan lakkawaman irra gahaa jiru balaalefachuun namoota seeraan ala rakkoon irraa gahaa jiru yaadatmani jiruu.
Haaluma kanaan goota Oromoo Injiner Tasfaahun Camadaa fi Ummata gara jabina Wayyaaneetiin Godina Arsii Lixaa magaalaa Kofaletti rsasaan dhumaniif miseensonni walgahichaa uffata gurracha uffachuun dungoo qabsiisanii gyyaa sanana yaadannoo isaaniitiin dabarsanii jiru.
Itti aansuun haala TBOJ gara fuulduratti jabaatee ittfufuun daraan saba Oromoo hunda ija walqixa ta’een tajaajiluu dnad’u irratti barumsi KHG TBOH ttin miseensotaaf kennamee jira. Haaluma kanaan miseensota akkataa lafa jireenya fi walitti dhiyeenya isaaniitiin bakka saditti qoodamanii akka sirritti wal jajjabeesanii TBOJiin keessatti qooda guddaa fudhachuun gumaacha lammummaa bahan godhamee jira. Haalli kun akan kanaan duraa caala miseensonni akka walitti djiyaatanii walajjajjabeesuu danda’an ta’uu isaa ragaaleen miseensota irraa argame irraa bu’aa walgahichaa hubatamuun danda’mee jira.
Xumura irratti gaafii adda addaa mana keessaa ka’eef ibsi erga godhamee booda walagahiichi milkiin xumuramee jira.